Ileta entsha ye-UNWTO eya kuMazwe angaMalungu: Ukwaphulwa kweMigangatho yoKuziphatha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ileta entsha ye-UNWTO eya kuMazwe angaMalungu: Ukwaphulwa kweMigangatho yoKuziphatha
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
Unobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili usandula kubonwa kunye noNozakuzaku waseMozambique eMadrid
Ekuphenduleni ingxelo yegosa lokuziphatha le-UNWTO kunye neleta evulekileyo evela kwizikhulu eziphezulu ze-UNWTO, uZurab Pololikashvili uye wathumela ngokukhawuleza ileta kuwo onke amaLungu e-UNWTO. Uphinde walungiselela isongezelelo sokucacisa ingxelo ye-HR ebonakalisa amazwi abalulekileyo eGosa le-UNWTO le-Ethics.
Kubonakala ngathi ngumzamo onzima wokusindisa isikhundla sakhe, ngelixa wenza izityholo zobuxoki kumagosa angaphambili aphezulu e-UNWTO.
Iimfuno ezinqwenelekayo zikhokelela kwizenzo ezinqwenelekayo kuNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili
Eli lixesha lokuqala uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili ephendula okanye ephendula kwi- eTurboNews nqaku.
Nangona kunjalo impendulo yakhe ayizange iye kumhleli, kodwa kuwo onke amaLungu aMalungu e-UNWTO. Ileta yakhe kunye ne i-addendum yathunyelwa ngoLwesihlanu, kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokuvota okuyimfihlo okunempikiswano eyenzelwe ukuphinda kunyulwe uPololikashvili elinye ixesha njengoNobhala-Jikelele we-UNWTO. Ivoti icwangciselwe uDisemba 3 ngexesha leNdibano Jikelele ye-UNWTO ezayo eMadrid.
UNobhala-Jikelele "wayezama ukucacisa" amazwi abalulekileyo awenziwe yi-UNWTO yeGosa lokuziphatha kwingxelo kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO kunye neleta evulekileyo ethunyelwe ngamagosa angaphambili aphezulu e-UNWTO malunga neengxelo ze-Ethics Officers malunga nenkcubeko yokulawula kunye nezenzo. UNWTO.
Oku kwalandelwa linyathelo elithatyathwe yiCosta Rica ukucela ivoti eyimfihlo kwi-UNWTO ezayo yokuqinisekisa ukuva uNobhala-Jikelele wokuqeshwa kwakhona.
UZurab Pololikashvili uvakalelwa ngokucacileyo phantsi kwesongelo sokungakwazi ukukhusela ixesha lakhe lesibini njengoNobhala-Jikelele we-UNWTO.
Imbali yakutsha nje kunye neeReferensi:
Kutheni uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Polokashvili engazange anyulwe ngokufanelekileyo ...
Umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica Inyathelo elikhulu le-UNWTO entsha…
Kutheni unyulo lwe-UNWTO kufuneka lube yiNgxaki eNgxamisekileyo…
Ileta yesibini evuliweyo ngamaGosa aPhezulu e-UNWTO abongoza…
Oonozakuzaku baseMadrid bamenywe kwi-UNWTO Bribery…
Ikamva le-UNWTO elibunjwe yiSaudi Arabia kunye neSpain: Inqaku elitsha…
I-UNWTO General Assembly ngoku eMadrid: Zurab…
I-UNWTO ifudukela eSaudi Arabia ibambekile: Unobhala-Jikelele…
Xa iNkosana yaseSaudi Crown kunye ne-PM yaseSpain beyithetha…
Intiyo ye-UNWTO ye-WTTC ibandakanya uthando olubhalwe kuTweet…
Kwileta yakhe, I-Pololikashvili ibhala ukuba phantsi kwexesha labameli be-UNWTO bangaphambili, kwenziwa izitenxo.
Nangona kunjalo, akukho nanye yeengxelo zophicotho-zincwadi zonyaka ezilungiselelwe ngabaphicothi-zincwadi abasuka kuMazwe angamaLungu e-UNWTO kukho naziphi na izitenxo ezixeliweyo.
Ukubhekisa kwakhe kwileta yamva nje eya kumazwe angamalungu sisityholo sobuxoki kubaphathi nabasebenzi bangaphambili, kwaye luphawu lwendlela uZurab ebetyhola ngayo abaphathi kunye nabasebenzi bangaphambili ukusukela oko wathatha isikhundla.
Oku kwadala umoya ombi kakhulu embuthweni kwaze kwaqalisa inkcubeko yokuxhatshazwa nokoyikiswa kwabasebenzi abaninzi abalungileyo (ababefudula bengaphambili).
Ukumiselwa koRhwaphilizo kunye noBuqhophololo
Ukususela kuZurab I-Pololikashvili yathatha isikhundla, i-UNWTO ibisenza iinzame ezininzi zokumisela urhwaphilizo kunye nokukhohlisa, ukwenza ngathi zonke iinkqubo zangaphakathi zilandelwa ngokuchanekileyo, umz. ngeenkqubo zokugaya kunye nokuthenga. Nangona kunjalo, enyanisweni, I-Pololikashvili yaqinisekisa ukuba iikomiti zokugaya kunye nokuthengwa kwempahla kwi-UNWTO zaqulunqwa kuphela ngabahlobo bakhe abalungileyo, abaza kuthatha nasiphi na isigqibo ayifunayo.
Ukuseka indawo yokongamela yangaphakathi ngokutyumba igosa lokuziphatha kwangaphakathi kwayilwa ngokucacileyo ukuba libe nolawulo olungaphezulu kwizikhalazo ezenziwe ngabasebenzi.
Ikwayilelwe ukoyikisa abasebenzi abafuna ukuchaza imiba.
Phantsi kolawulo lwangaphambili, bekukho igosa leenqobo zokuziphatha langaphandle elalinesikhundla esingathathi hlangothi nesizimeleyo.
Kwiinyanga zokuqala e-ofisini, I-Pololikashvili yatshintsha inkqubo kwindawo yokuziphatha yangaphakathi.
Wavakalelwa kukuba ngegosa langaphakathi leenqobo zokuziphatha kuya kuba lula ukusebenzisa uxinzelelo lokurhoxisa izikhalazo xa kuyimfuneko.
Usongelwa yingxelo yegosa lokuziphatha kunye neleta evulekileyo evela kubaphathi be-UNWTO abaphezulu be-Pololikashvili ngokukhawuleza bathumela ileta kuwo onke amaLungu eLungu le-UNWTO kwaye balungiselela isongezelelo kwingxelo ye-HR ebonisa amazwi abalulekileyo e-UNWTO Ethics Officer.
Kwimizamo enzima yokugcina isikhundla sakhe, wongeza izityholo zobuxoki kumagosa angaphambili akwizinga eliphezulu le-UNWTO.
Ileta kaNobhala-Jikelele kunye nesihlomelo sele yamkelwe ngokumangalisayo ngabaphathiswa bezokhenketho kumazwe angamalungu e-UNWTO.
Ngaphambi kokupapasha ileta, eTurboNews ifumene impendulo evela kubaphathiswa kunye namagosa ahamba phambili kwicandelo lezokhenketho, ebonisa inkxalabo kunye neentloni zokusabela kukaPololikashvili.
Kuyadanisa ukuba uPololikashvili utyhola amagosa angaphambili akwizinga eliphezulu le-UNWTO, kubandakanywa noonobhala-jikelele ababini bangaphambili ngokuphula imigangatho yokuziphatha kwabasebenzi bamazwe ngamazwe xa bephakamisa iinkxalabo ezinzulu malunga nenkcubeko yokulawula kunye nezenzo ngaphakathi kwe-UNWTO.
Ngaba ucinga ukuba ukugxeka akuvumelekanga kwi-UN?
Kwimbono kaPolokashvili, ukunyaniseka kubonakala kufana nokuphelisa ukugxeka. Yiyo kanye esi simo sengqondo kunye nesi simbo solawulo esoyikisayo esichasene nayo nayiphi na imilinganiselo ye-UN.
Zurab I-Pololikashvili ilungiselele le leta kunye ne-addendum kwingxelo ye-HR, kodwa i-addendum igcwele ulwazi malunga neemeko zemali kwiminyaka elishumi edlulileyo.
Ayikhange inike mathandabuzo kwiinkxalabo eziphakanyiswe ligosa lokuziphatha. Enyanisweni, olu hlobo lwempendulo lubonisa ngokucacileyo ukuba kutheni igosa lokuziphatha lenze amazwi agxekayo kwaye amagosa angaphambili aphakamileyo anquma ukuthumela ileta evulekileyo.
I-Pololikashvili ithatha ikhredithi ngokuguqula i-balance sheet ye-UNWTO ukusuka kwi-negative ukuya kwi-positive. Nangona kunjalo, wayishiya into yokuba i-Saudi Arabia ihlawule i-UNWTO ye-5 yezigidi zeedola ngokuseka iziko le-UNWTO lengingqi eRiyadh. Le 5 yezigidi zeedola yongeza kwiindleko kunye nokusebenza kweziko.
Inyaniso yokuba iGosa lokuziphatha libandakanya amazwi othusayo kunye nagxekayo kwingxelo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo kunye nokuba amaninzi amaninzi amagosa aphezulu e-UNWTO athatha inyathelo lokuqala kwaye abhale ileta evulekileyo ebhekiswe kumazwe angamalungu ibonisa ngokucacileyo ukuba kukho into engalunganga kakhulu. UNWTO.
Isitatimende sikaPololikashvili sokuba amagosa angaphambili e-UNWTO achaphazela ubumbano kunye nobumbano lwe-UNWTO alunangqondo. Ukwazi ukuba yena ukususela oko wathatha isihlalo ebenoxanduva lomanyano nomanyano loMbutho ukuze lutshatyalaliswe ziingxabano neempikiswano ezininzi awazisungulayo.
Igosa lokuziphatha kunye namagosa angaphambili e-UNWTO kufuneka adunyiswe ngokuthatha isenzo esibhence iZurab.
Awunakufumana nofifi lwengcaciso azama ukuyinika kwileta yakhe yamva nje eya kumazwe angamalungu.
Ufunda kuphela ingxolo, izityholo zobuxoki, kunye nokukhwaza, impendulo engafanelekanga kuNobhala-Jikelele we-Arhente ye-UN.
Ukuphazamiseka kwe-UNWTO kwiNkqubo yoNyulo oluzayo
Nangona amathandabuzo malunga nokuqinisekiswa kwexesha lesibini likaPololikashvili njengoNobhala-Jikelele we-UNWTO kwakhiwa, eTurboNews Ufunde ukuba amanye amagosa e-UNWTO asebenzisana nePololikashvili ukuqhagamshelana namazwe angamalungu. Bazama ukufaka uxinzelelo kubathunywa okanye benze izivumelwano zokukhusela iivoti ezixhasa ukuqeshwa kwakhona kukaPololikashvili.
Ukuba kukho nantoni na echasene nomgaqo wokuziphatha wabasebenzi baseburhulumenteni bamazwe ngamazwe, kukuphazamiseka kule nkqubo yokhetho lwe-UN. Abasebenzi be-UNWTO kufuneka bahlale bengakhethi cala ngamaxesha onke, ngakumbi xa kuziwa kunyulo.
Ukukhathazeka kuye kwavakaliswa ukuba iPololikashvili izama ngokunyanisekileyo ukuququzelela izivumelwano ukuba amazwe angamalungu angakwazi ukuthumela abameli kwiNdibano Jikelele eMadrid iya kuvumela amanye amalungu asondelene nePololikashvili ukuba avote egameni labo.
Iiveki ezimbini ezizayo ziya kubaluleka kwikamva le-UNWTO kunye nesikhokelo esifuneka kakhulu lo mbutho ekufuneka usinike inkqubo yokubuyisela ukhenketho kwihlabathi.
Kubalulekile ukuba amazwe angamalungu ahlale ethe qwa kwaye enolwazi olupheleleyo ngezigqibo eziza kuthathwa kunye neenkqubo zokuvota eziqhubekayo kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo. Le kuphela kwendlela enokuqinisekiswa ngayo ukuba iNdibano Jikelele iya kuqalisa inkqubo yokwakha kwakhona i-UNWTO eyomeleleyo.
Oku kuya kuba nomdla kuwo onke amazwe angamalungu e-UNWTO kunye nemibutho emininzi, oosomashishini, kunye nabasebenzi abasebenza ne-UNWTO kwicandelo lokuhamba kunye nokhenketho.
UNobhala-Jikelele we-UNWTO kufuneka asebenze ngokulinganayo kuwo onke amazwe angamalungu, hayi kuphela lawo uNobhala-Jikelele athembele kuwo ukuba aphinde anyulwe.
Ukungabi nabuchule kunye nokunqongophala kwenkxaso esemgangathweni egameni leshishini kwelona xesha linzima kwimbali yethu. UZurab ubenempindezelo kwaye engenambeko kubantu kunye nemibutho ayijonga njengengayixhasi imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zakhe kwinkqubo yokwahlula amahlakani ekudala ekho kwaye ngaloo ndlela yenza buthathaka i-UNWTO. Akathethi kwaye akaphumli! I-UNWTO ibifanelwe ngcono!!
Ileta yakhe iqinisekisa umbono wakhe ngombutho ovaliweyo ongalawulekiyo ngaphandle.Bekulindeleke ukuba asabele.
Akukho nto ikhankanywe kwileta yakhe malunga nengxelo yegosa lokuziphatha eyona nto ibhekiswa kuyo ileta evulekileyo kwaye iluxwebhu loluntu. Akukho sizathu sokuba agcine umhla webhunga lesigqeba ngoJanuwari xa i-FITUR isusiwe ngoJanuwari ukuya kuMeyi.
Wazi kakuhle malunga nenqanaba lokukhohlisa elilungiselelwe kuphela ukumbeka endaweni yokuqinisekiswa kwakhe.
Ileta yakhe ikukugrogrisa abagxeki nakwamanye amazwe angamalungu afuna ukumcela umngeni.
Usebenzisa eli qonga ukuzilungiselela ukuba yiNkulumbuso yelizwe lakhe, iGeorgia.
Kutheni wamisela i-CFO evela eGeorgia, ukuba impembelelo ngqo kwimicimbi yezemali ye-UNWTO ngokuzisa umntu ovela kwilizwe lakhe?
Uya kumabala amancinane ezama ukubanika uphawu loncedo okanye abanyobe ukuze bamvotele.
Ngeli xesha kufuneka asuswe kungenjalo uninzi lwamazwe angamalungu aya kufumana isivumelwano esikrwada kwiingingqi zabo.
Kungakho ukurhoxiswa okukhulu kwamalungu abalulekileyo. I-UNWTO inokuba yenye i-arhente ye-UN engasebenziyo kwaye engenamsebenzi, ukuba iqinisekisiwe kwaye iyaqhubeka.
Ileta kaZurab Pololikashvili ekubhekiselwe kuyo kweli nqaku:
eMadrid, nge-19 kaNovemba 2021
Ndiyathemba ukuba unxibelelwano lwam luya kukufumana uphilile. Ndinewonga lokuthetha nani ukuze ndikwazise ukuba ndibuhlungu kakhulu lunxibelelwano lwakutshanje olwenziwe ngabasebenzi be-UNWTO ababesakuba ngamalungu apapashwa kumajelo eendaba athile. Ngelixa lonke icandelo lezokhenketho lisokola neziphumo ezibi zobhubhane kwaye uMbutho wezoKhenketho weHlabathi ufuna ubumbano kunye nomanyano, umsebenzi wawo uhlala uphazanyiswa luthotho lwezityholo ezingenasihlahla ngabasebenzi abaphezulu be-UNWTO.
Ngelishwa, ezi mpapasho zenziwe ngeeleta zikawonke-wonke nakwi-youtube.com zijongela phantsi ukungafihli kunye nokuthembeka koMbutho, okwangoku usebenza nzima ekulungiseleleni iNdibano Jikelele ezayo eMadrid. Bakwachaphazela amaLungu amaLungu e-UNWTO afuna ukubona uMbutho womelele kwaye umanyene, kwaye ubuze ukuba semthethweni kwenkqubo yokwenza izigqibo zamaQumrhu alawulayo. Esi sizathu sokuba ndingaphinde ndithule kwaye ndizive ndinyanzelekile ukuba ndiphendule.
Ukophula imigangatho yokuziphatha kwenkonzo karhulumente yamazwe ngamazwe
Izityholo ezenziwe ngabasebenzi bangaphambili be-UNWTO ziyadanisa kwaye zothusa, ngakumbi, kuthathelwa ingqalelo ukuba, ekubeni besebenzele uMbutho iminyaka, bona, ngaphezu kwakhe nabani na, bafanele bakhusele kwaye bakhusele umfanekiso kunye nesidima sawo. Emva kokwenziwa ngokusesikweni kobudlelwane bekhontrakthi ne-UNWTO, nawuphi na umsebenzi, kubandakanywa nam, uzibophelele ukuba akayi kuphazamisana ngokungafanelekanga kwimicimbi yoMbutho kunye naleyo yamaBhunga awo aLawulayo ngexesha lakhe nasemva kokupheliswa kobudlelwane bengqesho. Ngelishwa, xa kusakhiwa iNdibano yeZizwe eziManyeneyo esi sibhambathiso siye saphulwa, kungekuphela nje kube kanye, kodwa kumatyeli aliqela. Ndiyazisola into yokuba uhlaselo olulolu hlobo aluyonto ngaphandle nje komzamo ozinzileyo wokukhohlisa kunye nokuthintela iinkqubo zokuthatha izigqibo zoMbutho, njengoko zisekwe kwiMithetho yawo. Kuphazamisa ngakumbi xa ngexesha lokuhlala kwabameli be-UNWTO bangaphambili, abasayini beleta evulekileyo, izitenxo zenziwa kwaye amaninzi amaninzi aMalungu abalulekileyo arhoxa, imeko leyo uMbutho ubuzama ukuyilungisa ukususela ngelo xesha.
Ukutyeshela ulongamo lweQumrhu Elilawulayo
Inkqubo yonyulo kunye nethayimthebhile yokutyunjwa liBhunga elinoLawulo oluPhezulu lomgqatswa oza kuthi athiwe thaca kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo, iphantsi kolawulo lweBhunga ngokwalo. Inkqubo exeliweyo kunye nethayimthebhile, eyamkelwe liBhunga lesiGqeba kwiseshoni yayo ye-112, kwakunye nomhla nendawo yeseshoni ye-113, zilandelwe ngokungqongqo kwaye zathotyelwa ngokupheleleyo nguNobhala, kubandakanywa ukwamkelwa, ukuvulwa nokuphononongwa kwezicelo, inkqubo eyenziweyo. ngentsebenziswano esondeleyo noMmeli kaSihlalo weseshoni ye-113 yeSigqeba soLawulo.
Ukunxila ngamajelo eendaba
Ngaphezu koko, i-UNWTO inerekhodi yezenzo zomthetho eziqaliswe ngokuchasene neendaba ezikhethiweyo zokusetyenziswa ngokungekho mthethweni kunye nokungagunyaziswanga kweempawu ze-UNWTO (2017), ukurekhodwa okungagunyaziswanga kunye nokupapashwa kweeseshoni ze-UNWTO zoLawulo loLawulo (2017-2018); kunye nongcoliso kubasebenzi boMbutho abangayiphathiyo imisebenzi yaseburhulumenteni (ngo-2019).
Okwangoku ndibophelelekile ukuba ndigcine enye yolwazi phantsi kwelungelo lomthetho, ukunqanda ukubeka esichengeni iinkqubo eziqhubekayo eziqalwe ngo-2018 ngokuchasene nabanye abasayinileyo le leta kunye nokukhusela isidima soMbutho. Ezi nkqubo zasungulwa emva kophicotho-zincwadi lokuqala olwenziwa liziko langaphandle, i-KPMG, ngesicelo sam ekuthatheni kwam isikhundla, ukuze kuchongwe izisombululo ezinokuthi zibe kho kwintsilelo yemali yoMbutho, eye yajongela phantsi inkonzo ye-UNWTO kuMalungu ayo kwaye izalisekisa. igunya layo.
Isigqibo samanye amaZwe angamaLungu sokunxibelelana ngokuzimeleyo ngejelo elithile leendaba sixhalabisa ngokukodwa. I-UNWTO yintlangano yakho, enye ekhonza amaLungu ayo, kwaye isoloko ivulekele nayiphi na ingcaciso echazwe ngendlela efanelekileyo ngamaLungu eLungu lawo, njengoko kubonelelwe kwisivumelwano se-UNWTO. Yimfezeko yabo bonke kunye neenkqubo zokwenziwa kwezigqibo ngamaBhunga ethu oLawulo endikhuthaza ukuba zihlonitshwe. Njengoko kusekwe kwiMithetho yoMbutho, apho onke aMazwe angamaLungu athe abambelela kuyo, la ngamaqonga afanelekileyo okuxoxa nokuxoxa ngemiba yombutho ngawo onke aMalungu oMbutho. Lo ngumgaqo obalulekileyo wokuqinisekisa ukusebenza okuchanekileyo kwamaqumrhu kunye neenkqubo zawo zokuthatha izigqibo kwakunye nezinto ezinomdla kunye nembonakalo yeziko loMbutho.
Ngokumalunga nezityholo ezingenasihlahla, ndinqwenela ukutsalela ingqalelo yakho kwingcaciso enikwe nguNobhala kwisihlomelo kuxwebhu A/24/5(c) olungeniswe ukuba luqwalaselwe yiNdibano Jikelele. Uya kufumana lonke ulwazi oluyimfuneko malunga nemizamo engazange ibonwe ukususela ngo-2018 ukuqinisa ngokuthe gqolo ukucaca kunye nokuphendula koMbutho kunye nokuseka umsebenzi wokongamela wangaphakathi owathi ngaphambi kowama-2018 akazange afumane inkxaso efunekayo ngabaPhathi bangaphambili.
AMazwe angamaLungu aBekekileyo, nceda wamkele iziqinisekiso zengqwalasela yam ephezulu.
ISIHLOMELO SE-UNWTO SINGENISWE KWIINDLELA EZINGALULUNGU